पीएसएलः सन्दीपको टिमले टस जितेर बलिङ रोज्यो - Everest Dainik - News from Nepal
पीएसएलः सन्दीपको टिमले टस जितेर बलिङ रोज्यो
काठमाडौं, फागुन २५ । पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) अन्तर्गत इश्लामाबाद युनाइटेड विरुद्धको खेलमा सन्दीप लामिछाने आवद्ध लाहोर कलन्दर्सले टस जितेर पहिला बलिङ गर्ने निर्णय गरेको छ । खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः४५ बजेदेखि कराँचीमा शुरु हुँदैछ ।
याे पनि पढ्नुस पीएसएलः सन्दीप आवद्ध लाहोरले पायो २३९ रनको लक्ष्य !
उसले ८ खेलमा ५ मा हार र ३ खेलमा मात्र जित निकाल्न सफल भएको छ । इश्लामावाद भने ९ खेलमा ४ मा जित र ५ मा हार बेहोर्दै अंक तालिकाकाे तेस्रो स्थानमा छ ।
यी दुई टिमबीच अहिलेसम्म ५ पटक भिडन्त भएको छ । जसमा २ मा लाहोर र २ खेलमै इश्लामाबाद विजयी भएको छ । एक खेल भने टाई भएको थियो । आजको खेलमा को–कोले पाए मौका? हेर्नुस्–